Mino An’i Jesosy ve ny Vavolombelon’i Jehovah? | Resadresaka
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mongol Mooré Myama Ndebele Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Venda Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
Toy izao ny resadresaka fanaon’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ny olona. Aoka hatao hoe mandalo any an-tranon’ny olona iray atao hoe Liva ny Vavolombelona iray atao hoe Ranto.
ZAVA-DEHIBE NY FINOANA AN’I JESOSY
Ranto: Manahoana i Liva. Faly aho mahita anao indray.
Liva: Izaho koa toraka izany.
Ranto: Nitondrako Mifohaza! sy Tilikambo Fiambenana farany ianao. Mino aho fa tena ho tianao ny lahatsoratra ato.
Liva: Misaotra betsaka. Soa ihany ianao nandalo, fa misy zavatra tiako hanontaniana.
Ranto: Hay! Inona izany?
Liva: Izaho moa ilay nomenao gazety iny, dia noresahiko tamin’ny mpiara-miasa amiko iray izay hoe tena mahaliana be ilay izy. Nilaza anefa izy hoe tsy tokony hamaky an’ireny, hono, aho satria tsy mino an’i Jesosy ny Vavolombelon’i Jehovah. Marina ve izany? Nolazaiko taminy fa hanontaniako anao izany raha vao mihaona isika.
Ranto: Faly aho fa nanontany ahy ianao. Tsara kokoa mantsy raha ny Vavolombelon’i Jehovah mihitsy no anontaniana ny zavatra inoany.
Liva: Marina izany.
Ranto: Fa izao: Tena mino an’i Jesosy ny Vavolombelon’i Jehovah. Hitanay hoe tena ilaina izany raha te ho voavonjy.
Liva: Izaho koa aloha nieritreritra hoe mino an’i Jesosy ianareo e. Fa rehefa notenenin’ilay mpiara-miasa aminay aho hoe tsy mino azy ianareo, dia mba tiako ho fantatra raha marina izany na tsia. Toa mbola tsy niresaka an’izany mihitsy isika.
Ranto: Misy andinin-teny maromaro manasongadina fa tena ilaina ny mino an’i Jesosy. Fampiasan’ny Vavolombelon’i Jehovah izy ireto rehefa mitory. Andraso fa hasehoko anao vetivety.
Liva: Eny àry e.
Ranto: Aleo ilay tenin’i Jesosy ao amin’ny Jaona 14:6 mihitsy no anombohantsika azy. Anisan’ny resaka nifanaovan’i Jesosy tamin’ny apostoliny anankiray izy io. Izao no voalaza eo: “Hoy i Jesosy: ‘Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako.’ ” Fomba iray ihany no ahafahantsika manatona ny Ray, araka io andininy io. Inona ilay izy?
Liva: Amin’ny alalan’i Jesosy.
Ranto: Izay mihitsy. Tena mino an’izany ny Vavolombelon’i Jehovah. Raha araka ny fahafantaranao azy, tokony hatao amin’ny anaran’iza moa ny vavaka ataontsika?
Liva: Amin’ny anaran’i Jesosy.
Ranto: Izay tokoa. Voamarikao angamba fa isaky ny mivavaka aho dia miteny foana hoe ‘amin’ny anaran’i Jesosy.’ Dia hoatr’izany daholo no ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Ranto: Ny Jaona 3:16 no hojerentsika manaraka. Tena miavaka io andininy io, ka misy milaza fa io no mamintina ny Filazantsara. Raha ohatra mantsy ka atambatra ao anatina andinin-teny iray ny fiainan’i Jesosy sy ny fanompoany teto an-tany, dia io andinin-teny io no tena mety. Asa raha tianao ny hamaky azy io?
Liva: Tsy maninona. “Fa lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay.”
Ranto: Misaotra anao. Mino aho fa tsy vaovao aminao io andininy io.
Liva: Ie. Efa imbetsaka aho no naheno an’io tany am-piangonanay.
Ranto: Tena be mpahalala izy io. Resahin’i Jesosy eo fa noho ny fitiavan’Andriamanitra dia afaka mahazo fiainana mandrakizay ny olombelona. Inona anefa no fepetra?
Liva: Mila maneho finoana.
Ranto: Ie. Finoana an’i Jesosy Kristy, ilay Zanany lahitokana. Miresaka an’izany indrindra ny pejy faharoa amin’ity gazety nentiko ho anao ity. Resahina eo fa anisan’ny zava-kendren’ny Tilikambo Fiambenana ny hoe mampirisika ny olona mba “hino an’i Jesosy Kristy, izay efa Mpanjakan’io Fanjakana io izao. Nahafoy ny ainy mantsy izy mba hahazoantsika fiainana mandrakizay.”
Liva: Mazava be izany. Hay ny gazetinareo mihitsy no manaporofo fa mino an’i Jesosy ianareo!
Ranto: Izany mihitsy.
Liva: Maninona àry ny olona no milaza fa tsy mino azy ianareo?
Ranto: Betsaka aloha ny antony mahatonga ny olona miteny an’izany e! Misy mamerina izay tenenin’ny olona fotsiny, na ny mpitondra fivavahana no niteny an’azy an’izany.
Liva: Ary sao dia ilay ianareo antsoina hoe Vavolombelon’i Jehovah fa tsy hoe Vavolombelon’i Jesosy?
Liva: Fa maninona anefa ianareo no miresaka be momba an’i Jehovah e?
‘EFA NAMPAHAFANTARIKO NY ANARANAO’
Ranto: Misy antony be dia be. Mino, ohatra, izahay fa zava-dehibe ny hampiasana an’ilay anaran’Andriamanitra hoe Jehovah, satria na i Jesosy Zanany aza nampiasa azy io. Misy vavaka nataon’i Jesosy tamin’ny Rainy ato amin’ny Jaona 17:26. Aleo hodinihintsika. Mba azonao vakina ve?
Liva: Eny àry. “Efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ilay fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho ho tafaray aminy.”
Ranto: Misaotra anao. I Jesosy mihitsy no niteny eo fa efa nampahafantatra ny anaran’Andriamanitra izy. Araka ny hevitrao, nahoana izy no nanao an’izany?
Liva: Marina raha fantatro.
Tena ilaina ny maneho finoana an’i Jesosy mba hahazoana famonjena
Ranto: Aleo àry isika hijery andinin-teny hafa, ohatra hoe ny Asan’ny Apostoly 2:21. Hoy izy eo: “Izay rehetra miantso ny anaran’i Jehovah no hovonjena.” Koa raha mila miantso ny anaran’i Jehovah ny olona mba ho voavonjy, tsy ho fantatr’i Jesosy ve izany?
Liva: Tsy maintsy ho fantany ka.
Ranto: Tena tian’i Jesosy hahafantatra sy hampiasa ny anaran’Andriamanitra àry ny mpanara-dia azy. Fantany mantsy fa ho voavonjy izy ireo raha manao an’izany. Izany koa no anisan’ny tena mahatonga anay hiresaka betsaka momba an’i Jehovah. Zava-dehibe aminay ny mampahafantatra ny anaran’Andriamanitra sy ny manampy ny olona hiantso azy io.
Liva: Kanefa na tsy mahalala ny anaran’Andriamanitra sy tsy mampiasa azy io aza ange ny olona, dia fantany ihany izay ivavahany e.
Ranto: Mety ho marina izany. Saingy nolazainy tamintsika ny anarany, amin’izay mba mora amintsika ny mifandray aminy.
Liva: Inona no tianao holazaina?
Ranto: Eritrereto àry izao: Tsy voatery ho nahafantatra ny anaran’i Mosesy isika. Azo natao fotsiny hoe ilay lehilahy nampisaraka ny Ranomasina Mena izy, na hoe ilay lehilahy nandray ny Didy Folo. Hoatr’izany koa i Noa. Azo nantsoina fotsiny izy hoe ilay lehilahy nanamboatra sambofiara, mba hamonjena ny ankohonany sy ny biby. Na i Jesosy Kristy aza azo noresahina fotsiny hoe ilay lehilahy tonga avy tany an-danitra ary maty noho ny fahotantsika. Sa tsy izany?
Ranto: Nampahafantarin’Andriamanitra antsika anefa ny anaran’ireo olona ireo, amin’izay isika matoky hoe tena nisy ilay tantara. Ny fahafantarantsika ny anaran’i Mosesy sy Noa ary Jesosy fotsiny dia efa mahatonga antsika hino hoe efa niaina teto an-tany izy ireo, na dia tsy nahita azy aza isika.
Liva: Mbola tsy nieritreritra an’izany indray aho. Fa hoatran’ny mitombina aloha ilay izy e!
Ranto: Izany koa no mahatonga ny Vavolombelon’i Jehovah hampiasa ny anaran’Andriamanitra foana. Miezaka manampy ny olona hanao toy izany koa izahay, satria tianay hino izy ireo hoe tena misy i Jehovah Andriamanitra ary afaka mifandray akaiky aminy izy ireo. Na izany aza, dia zava-dehibe aminay koa ny anjara asan’i Jesosy. Raha tsy izy mantsy izahay tsy ho voavonjy. Aleo isika hamaky andinin-teny iray farany.
Liva: Tsy maninona.
Ranto: Efa namaky ny Jaona 14:6 isika teo. Nolazain’i Jesosy ao fa izy no “lalana sy fahamarinana ary fiainana.” Andao hojerentsika izay nolazainy ao amin’ny Jaona 14:1. Asa raha tianao ny hamaky ny tapany farany amin’io andininy io!
Liva: Izao no voalaza eo: “Minoa an’Andriamanitra ary minoa koa ahy.”
Ranto: Misaotra anao. Tena manam-pinoana ve ny olona iray, raha ny iray amin’i Jehovah sy Jesosy ihany no inoany?
Liva: An, an, an. Nilaza i Jesosy hoe mila mino azy roa.
Ranto: Izay mihitsy. Tsy ampy anefa ny miteny fotsiny hoe ‘mino an’Andriamanitra sy Jesosy aho.’ Mila aseho eo amin’ny fiainana mihitsy izany.
Liva: Izany tokoa.
Ranto: Ahoana anefa no hampisehoan’ny olona iray hoe tena mino an’Andriamanitra sy Jesosy izy? Aleo hovaliantsika amin’ny manaraka izany. *
^ feh. 60 Manazava bebe kokoa an’izany ny toko 12 amin’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Hizara Hizara Mino An’i Jesosy ve ny Vavolombelon’i Jehovah?